Ny firafitry ny Tany: izay rehetra tokony ho fantatrao | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 18/02/2021 12:00 | Nohavaozina amin'ny 18/02/2021 15:04 | Ciencia
Miaina amin'ny planeta iray tena sarotra sy feno isika izay misy lafiny maro tsy voatanisa izay mahatonga azy io hitandrina mandanjalanja ary hamela ny fiainana. Ny firafitry ny Tany Mizara roa fototra izy io. Voalohany aloha no dinihina ny atin'ny planetantsika. Zava-dehibe ny fahalalana izay ao anatin'ny Tany mba hahatakarana ny lafiny ivelany maro. Aorian'izay dia ilaina ihany koa ny famakafakana ireo faritra ivelany rehetra mba hilamina, amin'ny ankapobeny, hahafantarana ny planeta onenanay.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika sy ho fantatsika lalina ny firafitry ny tany manontolo. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
1 Rafitra anatiny amin'ny tany
2 Firafitra ivelany amin'ny tany
2.1 Ny hydrosfera
2.2 rivotra iainana
3 Moa ve homogeneous sa heterogenène ny firafitry ny tany?
Rafitra anatiny amin'ny tany
Ny tany dia manolotra firafitra niforona avy amin'ny sosona concentric izay mifandimby ireo singa rehetra mandrafitra azy. Ny fisarahan'izy ireo sosona dia azontsika fantarina noho ny fivezivezin'ny onja-dranomasina rehefa misy horohoron-tany. Raha mandinika ny planeta isika avy ao anatiny ka hatrany ivelany, dia afaka jerentsika ireto sosona manaraka ireto.
Ny vovo-tany dia ny sosona anatiny indrindra vy sy nikela be dia be no hita. Miempo kely izy io ary io no mahatonga ny Tany hanana sahan'andriamby. Antsoina koa hoe endosfera.
Ny fitaovana dia voarendrika noho ny hafanana avo izay ahitana ny fotony. Ny sasany amin'ireo fizotran'ny anatiny eto an-tany dia miseho ambonin'ny tany. Afaka mahita horohoron-tany, volkanisma na famindran-toerana ireo kaontinanta (tectonics plate) isika.
Ny akanjon'ny tany dia eo ambonin'ny fotony ary silikao no mandrafitra azy. Izy io dia sosona matevina noho ny atin'ny tany ary tsy dia matevina rehefa manakaiky ny tany. Antsoina koa hoe mesosfera.
Mandritra io sosona malalaka io dia atao fisehoan-javatra maro amin'ny fampitana fitaovana. Ireo hetsika ireo no mampihetsika ny kaontinanta. Ireo fitaovana mafana kokoa izay avy amin'ny fotony dia miakatra ary rehefa mangatsiaka izy ireo dia miverina any anatiny. Ireo onjam-pifanarahana ao anaty akanjobe ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fihetsiky ny takelaka tektonika.
Io no sosona ivelany indrindra amin'ny atin'ny tany. Antsoina koa izy io fitaratra. Izy io dia mirakitra silicates maivana, carbonates ary oksida. Izy io dia matevina indrindra amin'ny faritra misy ny kaontinanta ary manify indrindra any amin'ny ranomasina. Noho izany, dia mizara ho an'ny crustage any amin'ny ranomasina sy kontinanta. Ny crust tsirairay dia samy manana ny hakiny ary misy akora sasany.
Izy io dia faritra mihetsika ara-jeolojika izay isehoan'ny ankamaroan'ny fizotra anatiny. Izany dia vokatry ny hafanana ao anatin'ny Tany. Misy ihany koa ny fizotran'ny ivelany toy ny fikaohon-tany, fitaterana ary fanamainana. Ireo dingana ireo dia vokatry ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny herin'ny hery misintona.
Firafitra ivelany amin'ny tany
Ny faritra ivelany amin'ny tany koa dia misy sosona maromaro izay manangona ireo singa terestrialy rehetra.
Io no faritry ny faritry ny rano rehetra izay misy ao amin'ny vovoky ny tany. Ny ranomasina sy ny ranomasina, ny farihy ary ny renirano rehetra, ny rano ambanin'ny tany sy ny vongan-dranomandry dia hita. Ny rano ao amin'ny hydrosfera dia eo amin'ny fifanakalozana mitohy. Tsy mijanona amin'ny toerana voafaritra izany. Izany dia vokatry ny tsingerin'ny rano.
Ny ranomasina sy ny ranomasina irery no mitazona telo ampahefatry ny tany manontolo, noho izany dia lehibe ny lanjan'izy ireo amin'ny haavon'ny planeta. Misaotra ny hydrosfera fa manana ny lokony manga ny planeta.
Zava-dehibe levona be dia be no hita ao anaty rano ary iharan'ny hery lehibe. Ny hery miasa eo amin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny fihodinan'ny Tany, ny fanintona amin'ny volana ary ny rivotra. Noho izy ireo dia mivezivezy ny rano be toy ny onjan-dranomasina, onja ary onja. Ireo hetsika ireo dia misy fiatraikany lehibe amin'ny sehatra manerantany, satria misy fiatraikany amin'ny zavamananaina. Voakasiky ny onjan-dranomasina koa ny toetrandro misy vokany toa an'i El Niño na La Niña.
Mikasika ny rano vaovao na kontinanta, azontsika atao ny milaza fa tena ilaina amin'ny fiasan'ny planeta izy ireo. Izany dia satria izy ireo no mandrafitra ny erôzôma miiba indrindra eto ambonin'ny tany.
Ny rivotra iainana Ny sosona gazy manodidna ny Tany iray manontolo ary tena ilaina amin'ny fivelarana aina. Oksizenina no entona fandefasana mandritra ny fiainana araka ny ahafantarantsika azy. Ho fanampin'izay, maro ny entona manampy amin'ny fanivanana taratra masoandro izay mety hahafaty ny zavamananaina sy ny tontolo iainana.
Ny atmosfera kosa dia mizara ho sosona samihafa, samy manana ny halavany, ny asany ary ny endriny samy hafa.
Manomboka amin'ny ny troposfera, dia iray izay mivantana mivantana amin'ny velaran'ny tany. Tena zava-dehibe izany satria eo amin'ny toerana onenanay sy ilay manome ny trangan-javatra toetr'andro toy ny orana.
Ny stratosfera io no sosona manaraka izay manitatra mihoatra ny 10 km amin'ny troposfera. Ao amin'ity sosona ity dia ny fiarovana ny taratra UV. Io ilay sosona ozone.
Ny mesosfera manaraka avo kokoa izy io ary misy ozone sasany koa.
Thermosfera nantsoina toy izao izy satria, noho ny vokatry ny taratra masoandro, ny mari-pana dia mety mihoatra ny 1500 ° C. Ao no misy ny faritra antsoina hoe ionosfera, izay atôma maro no very elektrôna ary miendrika ion, mamoaka angovo izay mamorona ny jiro avaratra.
Ny biosfera tsy sosona amin'ny Tany io, fa io no setran'ny tontolo iainana rehetra misy. Ny zavamananaina rehetra monina eto amin'ny planetantsika dia mandrafitra ny biosfera. Noho izany, ny biosfera dia ampahany amin'ny crust eto an-tany, fa ao koa amin'ny hidrôfôfera sy ny atmosfera.
Ny mampiavaka ny biosfera dia ilay antsoina hoe biodiversité. Izy io dia momba ny karazan-java-manan'aina sy endrika fiainana hita eto ambonin'ny planeta. Ho fanampin'izay, misy ny fifandraisana mandanjalanja eo amin'ireo singa rehetra ao amin'ny biosfera izay tompon'andraikitra amin'ny zava-drehetra mba hiasa tsara.
Moa ve homogeneous sa heterogenène ny firafitry ny tany?
Noho ny fomba fandalinana isan-karazany dia fantatra fa misy heterogène ny atin'ny planetantsika. Izy io dia voarafitra amin'ny faritra mifangaro izay manana fananana samihafa. Ireto ny fomba fandalinana:
Fomba mivantana: Izy ireo dia ireo izay mandinika ny fandalinana ny fananana sy ny firafitry ny vatolampy izay mamorona ny tany. Ny vatolampy rehetra dia azo kitihina mivantana avy aty ivelany mba hahafantarana ny fananany rehetra. Misaotra an'izany, any amin'ny laboratoara dia tombanana avokoa ny mampiavaka ny vatolampy izay mamorona ny hoditry ny tany. Ny olana dia tsy azo atao hatramin'ny 15 kilometatra ny halalin'ireny fanadihadiana mivantana ireny.
Fomba tsy mivantana: dia ireo izay miasa ho an'ny fandikana ny angon-drakitra mba hamintinana hoe toy ny ahoana ny atin'ny Tany. Na dia tsy afaka miditra mivantana amin'izy ireo aza isika dia afaka mahafantatra ny atitany noho ny fandalinana sy ny famakafakana ny fananana sasany toy ny hakitroky, ny maherifo, ny hery misintona ary ny onjampeo. Na dia amin'ny famakafakana ny meteorites aza dia azo fongorina koa ny firafitry ny tany.
Anisan'ny fomba lehibe ankolaka misy mba hahatonga ny firafitry ny tany ny onja-dranomasina. Ny fandalinana ny hafainganan'ny onja sy ny làlan-kalehany dia namela anay hahalala ny atin'ny Tany, na ara-batana na ara-drafitra. Ary izany ve miova ny fihetsik'ireo onja ireo arakaraka ny toetra sy ny toetoetran'ny vato mandalo izy ireo. Rehefa misy faritra fiovana eo amin'ny fitaovana dia antsoina hoe discontinuity.
Avy amin'izany fahalalana rehetra izany dia manaraka fa misy afovoany ny atin'ny Tany ary miorina amin'ny faritra concentric izay samy manana ny toetrany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny firafitry ny Tany sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Ny firafitry ny Tany
inona no olana dia hoy izy:
tena tsara ny pejy
Mamaly an'i qleimporta
Marcelo Daniel Salcedo Guerra dia hoy izy:
Tena tsara tamin'ny pejy nianarako zavatra betsaka momba an'io lohahevitra io
Valiny tamin'i Marcelo Daniel Salcedo Guerra
Jose Reyes dia hoy izy:
Fanontana tena tsara, feno tanteraka.
Valiny tamin'i José Reyes